JIRAMA: Madio ny rano atolotra ny mpanjifa · déliremadagascar
JIRAMA: Madio ny rano atolotra ny mpanjifa
Socio-eco	 27 février 2020 .
1- Manome antoka ny rano vokariny sy tsinjarainy hoan’ny mpanjifa ny JIRAMA.
2- Misy ny fangalana santionan’ny rano amin’ny toerana maromaro isan’andro (tobim-pamokaran-drano, tambazotra mpitsinjara rano, robinets any an-tokantrano ary paompin-dranon’ny daholobe).
3- Manana laboratoara fanaovana fitiliana « physico-chimiques » ny JIRAMA ao Mandroseza ary miara-miasa akaiky amin’ny Institut Pasteur de Madagascar amin’ny fanaovana fitiliana « bactériologique ».
4- Manaraka ny ambaratongam-panadiovana takian’ny fenitra iraisam-pirenena ny rano vokarin’ny JIRAMA manerana ny nosy (décrets n°2003-941 et n°2004-635) ary manaja ireo fenitra napetraky ny OMS.
Fampitam-baovaon’ny JIRAMA OFISIALY